2010 Kawasaki လားနှင့် Teryx lineup ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36735)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11272)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9965)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9831)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7485)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7477)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6450)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (6051)
Home → Kawasaki → 2010 Kawasaki လားနှင့် Teryx lineup ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ
20 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2010 Kawasaki လားနှင့် Teryx lineup ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ
After leaving its 2010 ATV lineup largely unchanged, Kawasaki tookadifferent approach with its side-by-sides by introducingasporty new Mule (ဟုတ်ကဲ့, you read that correctly) and giving the already impressive Teryxafew tweaks.
When it comes to working vehicles, Kawasaki’s Mule is one of the first names that spring to mind. The Mule name has been around for more than 20 years and the entire lineup received some key cosmetic and performance upgrades in 2009. ဘို့ 2010, Kawasaki decided to addalittle fun to its side-by-side workhorse.
Thanks to the burly new tires, Kawasaki says the Mule has much better traction, ground clearance has been increased by 1.4 inches to 8.1 inches and the track has been widened by 1.3 လက်မ. To accommodate that new capability, new 1.1 inch longer front and 1.5 inch longer rear suspension should help the Mule climb over larger obstacles than ever, while standard skid plates protect vital systems.
To help make room for the new tires, the front bumper has been moved forward about 1.2 လက်မ, and while they were at it the Mule team added sporty new graphics. လည်း, Kawasaki saysanew and more comfortable seat covered inamore pliable material has been added, as well asasmaller-diameter sport steering wheel lifted straight from the Kawasaki Teryx.
Kawasaki KR 1 S က
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဟွန်ဒါ DN-01 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 ဆူဇူကီး Colleda CO အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Bajaj Discover Ducati 60 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati Diavel Brammo Enertia ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati Desmosedici GP11 Aprilia Mana 850 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် စမတ် eScooter